Ngifunde okukhulu iposi kusuka ku-blog osebenza naye omusha namuhla ku-Blog Burnout. Kwangenza ngazibuza ukuthi ngabe zonke lezi zinto zokubhuloga zingithathaphi. Hhayi ukuthi ngicabanga ukuqeda ukubhuloga kwami, akukho thuba lalokho! Ngiyayithanda kakhulu (futhi ngiqonde kakhulu!). Ngeshwa, ngingahle noma ngingalunge kangako - kuya ngokuthi ubheka kanjani. Ngakho-ke angikwazi ukuyeka umsebenzi wami wosuku okwamanje (futhi angifuni ngempela ukukwenza lokho, noma).